Semalt Expert: Nahoana ary ahoana no fampiasana an'i Amazon mba hanamboarana brand e-commerce?
Ny tsenam-bokin'i Amazonia dia toy ny sehatra iray ahafahan'ny olona manomboka marika sy mianatramikasika ny fitondrantenan'ny mpanjifa. Manampy amin'ny fampiroboroboana ny mpandraharaha. Ny orinasaAfaka manao tsara ny tranonkala raha ampitahaina amin'ny fenitry ny tsena. Ny fampiasana ny tsenam-bola ho loharanom-bola azo antoka dia tombony fanampiny.
Artem Abgarian, Tale Mpitarika Success Success an'ny Semalt ,dia mamelabelatra ny fampiasana Amazon mba hananganana marika e-commerce mahomby.
Alohan'ny hahatanterahana ny tanjona feno amin'ny tsena, dia tsara ny manomboka amin'nyhifantoka amin'ireo fitsipika fototra - connecticut partnership for long term care. Amazon dia manampy amin'ny fandraisana mpanjifa amin'ny orinasa. Amin'ny farany, rehefa mahazatra ny fomba fiasa ny olona, ​​dia afaka mampiasa azy ireo avy eoNy fahefana hampiasa Amazon mba hampitombo ny marika.
Nanisa ny roa amby roapolo isan-jaton'ny fikarohana i Amazon. Tamin'ny fahaefatra fahaefatra tamin'ny 2016,I Amazon dia tompon'andraikitra amin'ny vidin'ny 60 isan-jaton'ny fivarotana e-varotra rehetra. Farany, ny ankamaroan'ireo zavatra amidy eny amin'ny lampihazo dia avy amin'ny antoko fahatelompivarotra.
Ireo zava-misy ireo dia maneho fa ny ankamaroan'ny mpanjifa matetika Amazon dia mitadyvokatra. Noho izany, ny fampiasana izany ho an'ny fahatsiarovan'ny marika sy ny fahatsiarovan'ny mpanjifa dia hanampy ny orinasa mifantoka ny vokatra sy ny fivarotana manodidina ireohevitra amin'ny toerana iray ahafahana mifaninana amin'ireo mpifaninana ambony.
Amin'ny fampiasana Amazona, dia manohitra ny torolàlana amin'ny fampivoarana ny orinasa ho an'ny mpanjifa mety.Na dia izany aza, i Amazon dia ahafahan'ny orinasa manamboatra ny fivarotam-pividianany mankany amin'ny toerana iray ilàna azy ireo hitsidika ny vohikalan'ny orinasa. Ohatra,Ny mpanjifa dia afaka mividy vokatra manokana avy amin'ny orinasa iray, saingy ny fisoloana azy dia hita ao amin'ny tranonkala..
Ny adinon'i Amazon dia manangana fanentanana
Mitovy amin'ny AdWords ny doka namboarina amin'ny Amazon noho izy miankina amin'ny teny fanalahidy. SponsoredIlaina ny dokam-barotra satria mety hampiasa azy ireo ny mpandraharaha mba handefa orinasa mikarakara vokatra mitovy. Ny vidin'ny tsindry dia ambany noho nyfikarohana karama.
Amazonia sy SEO
Raha vantany vao misy orinasa manomboka mitombo ny fivarotana, dia misy ny fepetra avo indrindraNy vokatra dia hanomboka hiseho eo amin'ny ambaratonga voalohan'i Amazon. Noho izany, Google dia handray ireo toetra avo lenta ireo. Fampiasana vokatraNy teny fanalahidy toy ny fitaovana fototra ho an'ny fikarohana organika ao amin'ny Google dia hitarika mpanjifa amin'ny vokatra ao amin'ny orinasa.
Amin'ny fikaroka organika, sy ny fitondrana mpanjifa any Amazona, hahatsapa ireo mpividy fa nyNy vokatry ny orinasa dia miseho amin'ny tranonkala maro. Izany dia mampiroborobo ny fahatsapana fahatokisana amin'ny mpanjifa. Raha mividy ny entany amin'ny fomba tsara ny orinasa,Azo antoka fa hanome fanamarinana tsara izy ireo. Ny kintana fandinihana dia midika zavatra maro ho an'ny mpanjifa tsy mifanaraka.
Maro ny olana mahakasika ny mpivarotra alohan'ny hifampiraharaha amin'ny Amazon:
Nandà ny marika i Amazon raha tsy misy antony. Tsy marina ny fanorenan'ny marikamiankina amin'ny antoko fahatelo raha mbola miasa ao anatin'ny torolàlan'i Amazona.
Nandray raharaham-barotra i Amazôna raha vao nivoaka. Ny mpiasan'i Amazon fotsiny dia mangataka ny olona hisafidyAmin'ny maha mpivarotra mpivarotra na mpivarotra azy, saingy ny fanapahan-kevitra dia tanteraka amin'ny olona voakasik'izany.
Amazonia dia manavaka amin'ny fivarotana e-commerce tsotra. E-varotra fivarotana amin'nytranonkala iray miorina amin'ny tranokalam-pifaneraserana ary fitenenana toy ny Google.
Ny famokarana amazonin'i Amazona dia tetikady mifototra amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fampiharana ny sata mifehy.Betsaka ny lisitra misy ao Amazona noho ny raharaham-barotra hivarotra sy hahazo mpanjifa. Ny tompony no manapaka ny tetikady tsara indrindra ho azy ireo.